सन्दीप लामिछानेमाथि कर छलीमा अनुसन्धान ? – Dcnepal
सन्दीप लामिछानेमाथि कर छलीमा अनुसन्धान ?
प्रकाशित : २०७६ कार्तिक २६ गते १६:१४
काठमाडौं । नेपालका सर्वाधिक सफल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले करिब ६ करोड रुपैयाँमा भव्य बंगला किनेका छन् । करिब २० वर्षकै उमेरमा आफ्नै कमाईबाट उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा बंगला किनेका हुन् । सन्दीपको यो सफलता निकै लोभलाग्दो छ र सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर, नयाँ बंगला खरिद गरेसँगै उनमाथि समस्या समेत थपिएको छ । उनी करको लफडामा पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उनको आय र करको विवरणमाथि छानबिन थालेको आजको दृष्टि साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।
विश्वका धेरै चर्चित खेलाडीहरु करको लफडामा परेका छन् । मेसीदेखि रोनाल्डोसम्मलाई यस्तो कसुरमा सजाय भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सन्दीप पनि करको लफडामा परेका छन् । यद्यपि, उनले कमाई लुकाउन बैंकबाट कर्जा समेत लिएका छन् । तर, पनि गम्भीर छानबिन भए उनीमाथि कारबाही हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।